I-Goldsmith Jewellery Italian Unoaerre - Arezzo
Ubucwebecwebe base-Italy: Idizayini ne-Glamour Made e-Italy
5.0 /5 amavoti (amavoti angama-98)
Unoaerre, ku- Arezzo, ingenye yezinkampani ezihamba phambili emhlabeni ezigxila ekukhiqizeni, ukusabalalisa kanye nokuthekelisa imikhiqizo ye Igolide. Nge Indalo yeGolide di Ubucwebe obuphezulu, e-Italy, futhi umkhiqizo ophambili ku- Izindandatho zomshado. Thola Unoaerre: kusukela ngo-1926 ubucwebe base-Italy emhlabeni.
Ubucwebe base-Italy base-Unoaerre e-Arezzo - Umholi emakethe yamazwe wegolide emhlabeni jikelele
Igolide e Ubucwebe be-Unoaerre wazalwa ngoMashi 15, 1926 isikhangiso Arezzo, lapho UCarlo Zucchi e ULeopoldo Gori, "obaba abasungula" ababili benkampani yokuqala yabakhandi begolide edolobheni. Eminyakeni engaphezu kwengu-90 yokusebenza, izizukulwane ezahlukahlukene zabakhandi begolide, ochwepheshe, amakhosi nabadwebi bakhile futhi bakhulisa iqiniso lomnotho kulo mkhakha, okusahlukile emhlabeni nanamuhla. Alikho izwe emhlabeni lapho lezi zingakafiki khona Indalo yeGolide di Unoaerre, lapho Izindandatho zomshado. Ngaphezu kwalokho, Unoaerre ngithole Isitifiketi se-ACCREDIA ekuhlaziyweni kwesihloko sama-alloys egolide ngokwamazinga amukelwa umhlaba wonke. Namuhla Unoaerre kuqhayisa ukusatshalaliswa komkhiqizo kwe Isikhiphi segolide segolide kanye nobucwebecwebe emazweni angaphezu kwama-40 emhlabeni wonke futhi aqondisa amagatsha eFrance naseJapan kanye nawo Indalo yeGolide igama lokugqama kwe Made in Italy.
Unoaerre umkhandi wegolide e-Arezzo - ubucwebe obuphezulu base-Italy
Unoaerre Ubucwebe Begolide Base-Italy ubuhlakani, idizayini, ukuphelela, ikhwalithi. Ukuthuthukiswa kwe- Indalo yeGolide wazalwa enkampanini, isikhangiso Arezzo, sibonga iqembu lochwepheshe abalandela yonke inqubo yokudala neyokukhiqiza. Kusukela ekuhlanganisweni nasekuhlanganisweni kokuhlangana kwezinsimbi eziyigugu kakhulu kanye nesandla sochwepheshe somuntu bayazalwa Indalo yeGolide ubuhle obumakiwe nokucwengwa: izici ezinquma isitayela sase-Italy esenziwe ngobukhazikhazi nangobungcweti okwenza igugu libe yinto yezifiso eziboniswa emafasiteleni ezitolo emhlabeni wonke. Kusuka emlandweni weIgolide kanye nesipiliyoni se-stylistic Unoaerre futhi ubucwebe beklasikhi nenhle bazalwa ngethusi nama-alloys ayigugu, baxhonywe yi-gilding namatshe ayigugu. Ngaphezu kwalokho, amaqoqo aqhamuka ezweni lemfashini noma izitayela zamanje 1AR ngu-Unoaerre: Indalo yeGolide ahlanganisa ukwakheka kwamanje kakhulu futhi okunesitayela nge-masmith yegolide enkulu yeI-Italian High Goldsmithery.
Unoaerre umkhandi wegolide e-Arezzo - Ukudalwa kweGoldsmith
IGoldsmithery kanye neJewellery Unoaerre Namuhla futhi ingumholi ekukhiqizweni kwamaketanga ethusi nezesekeli zemfashini, izesekeli kanye ne-bijoux, futhi phakathi kwamakhasimende ayo ibala amagama ahlonishwa kakhulu kwezemfashini kazwelonke nakwamanye amazwe abasebenzisa le mikhiqizo ukuqeda nokuqedela izesekeli, njengezikhwama, izicathulo, okokugqoka. E-Italy, Unoaerre futhi iphoyinti langempela lereferensi ye Izindandatho zomshado. Hhayi izindandatho ezilula, kodwa izimpawu zezethembiso zothando lwaphakade ezingaphezulu kweminyaka engu-90 zihambisane nemibhangqwana enothando empilweni yayo ndawonye. Lapho Unoaerre di Arezzo ihlelwe njengenye yezinto ezinamandla kakhulu nezishukumisayo ze-Italian goldsmith ezingokoqobo zombili ekukhiqizeni i- Indalo yeGolideYe-High Jewellery, womabili wokusatshalaliswa kwalawa emhlabeni, enikeza ukusunduza okunamandla ku Made in Italy emhlabeni wonke.
Ubucwebe be-Unoaerre base-Italiya e-Arezzo - Goldsmithery kusukela ngo-1926
Ubucwebe begolide base-Italy Unoaerre, ku- Arezzo, imelela umhlaba wonke uhlobo lokugqama kwe Made in Italy. Ngenxa yobumbano oluhle lolwazi lwe-Goldsmith nokunaka izitayela, Unoaerre imele ukuhlangana kobukhazikhazi nobungcweti obuphawula wonke amaqoqo awo Ama-Jewels and Goldsmith Creations. E-Italy nakwamanye amazwe, Ubucwebe begolide base-Italy Unoaerre yisibonelo esiphelele senkampani yase-Italy ekwazi ukufeza izimfuno zemakethe ngenkathi igcina amanani aphezulu ekhwalithi nokuphelela. Thola manje lonke lokusungula kwe I-Unoaerre: ubucwebe begolide base-Italy kusukela ngo-1926.
Ikheli: ISan Zeno Strada E n. 5
I-POSTAL CODE: 52100
Umakhala ekhukhwini: 0575 9251
Yefeksi: 0575 381764
Twitter: Togo nathi
Inombolo ye-VAT: 02039680513